စစ်ပွဲ၏အကြောင်းရင်းများ — Steemkr
စစ်ပွဲများအချိန်အရုဏ်ကတည်းကပေါ်ကျော်သွားကြပြီ, ကပုံရသည်။ သူတို့ကကြောက်မက်ဘွယ်သောနှင့်ကပ်ဘေးဆိုင်ရာဖြစ်ကြသေးကျနော်တို့ဖြစ်ပျက်မှသူတို့ကိုရပ်တန့်ဖို့ဘယ်လိုသိမပုံရသည်။ ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့တစ်ခုလုံးကိုဘဝတွေကိုများအတွက်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်စစ်ပွဲများမျက်မြင်ကြသူတွေကိုကြောင့်စစ်ပွဲများနောက်ကွယ်မှအကြောင်းရင်းများနှင့် ပတ်သက်. အတှငျးမှကောင်းလှ၏။ စစ်ပွဲများအစဉ်အမြဲရှိသောကြောင့်အမျက်ဒေါသ, မနာလိုမှု, မကျေနပ်မှု, ဒါမှမဟုတ်အမုန်းတရား၏ကောက်ယူကြသည်မဟုတ်။ တစ်ဦးဒါခေါ် "ပဲစစ်။ " ရှိပါတယ်ဥပမာ, အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရိန်းစစ်ဤအကြောင်းပြချက် delineate: "လူအမျိုးမျိုးတို့၏လတ်တလောကာကွယ်ရေး (တစ်ဦးတိုက်ခိုက်တုံ့ပြန်) ထုတ်လုပ်မှု4နည်းလမ်း 2) ကုန်ကြမ်းထိန်းချုပ်ရေး 3) ထိန်းချုပ်ရေး ကုန်သွယ်မှုလမ်းကြောင်းများ 5) ထိန်းချုပ်ရေး) ကုန်သွယ်မှုအမြတ်အစွန်းနိုင်ငံ၏အကောင်းဆုံးအကျိုးစီးပွားအတွက်အထက်ပါဝင်သော 6) စာချုပ်တာဝန်ဝတ္တရား "(The Economist) ၏ထိန်းချုပ်ရေး။ ကျနော်တို့ကအောက်ပါစာပိုဒ်တွင်ဤအကြောင်းတရားများနှင့်ပတ်သက်ပြီးအသေးစိတ်သို့သွားပါလိမ့်မယ်။
ကျူးကျော်ခြင်းမှတဦးတည်းရဲ့လူမြိုးတဈမြိုး Defending အများဆုံးစံချိန်စံညွှန်းများဖြင့်စစ်တိုက်ခြင်းအရှိဆုံးမှုးမတ်များနှင့်ကိုယ်ကျင့်တရားအကြောင်းပြချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ယင်း၏လူများနှင့်အမျိုးသားရေးနယ်နိမိတ်တခုတခုအပေါ်မှာတိုက်ခိုက်မှုဆန့်ကျင်တုံ့တစ်ဦးကနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံသည်၎င်း၏နိုင်ငံသားများနှင့်အမျိုးသားရေးလက္ခဏာကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်နေပါသည်။ တစ်သားကောင်ဖြစ်ခြင်းနှင့်သင်ထိခိုကျခဲ့ကြတဲ့သူတွေကိုပြန်နှိပ်အတွက်အပြစ်ကင်းစင်ရှိပါသည်။ ခရစ်ယာန်အယူဝါဒခွင့်လွှတ်ခြင်းအပေါ်မှီခိုနှင့်စစ်ပွဲများအတွက်စေ့စပ်အများဆုံးအနောက်တိုင်းနိုင်ငံများဖြစ်ကြသည်သော်လည်း "ခရစ်ယာန်လူမျိုး" အဖြစ်ကျူးကျော်တစ်ခုသို့မဟုတ်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအပေါ်တိုက်ရိုက်တိုက်ခိုက်ဆန့်ကျင်ပြန်တိုက်ခိုက်နေစစ်ပွဲ၏အများဆုံးပဲပုံစံ (ဘီဘီစီ) အဖြစ်ရှုမြင်ခြင်းဖြစ်သည်။
ရရှိမှုနှင့် / သို့မဟုတ်ကုန်ကြမ်းထိန်းချုပ်ထိန်းသိမ်းခြင်းစတင်ထောကျခံရဖို့စစ်ပွဲများများအတွက်အခြားသော့ချက်အကြောင်းရင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဝက်ဘ်ဆိုက်ခေတ်သစ်သံတမန်ရေးပြည်နယ်များအဖြစ်, "ကုန်ကြမ်းများအတွက်စစ်အခြားပေါ်တွင်တဦးတည်းလက်တွင်အနောက်နိုင်ငံများမှတပါးအမျိုးသားတို့တွင်ပါဝါဆက်ဆံရေး, နှင့်ထွန်းသစ်စနှင့် / သို့မဟုတ်ဖွံ့ဖြိုးဆဲတပါးအမြိုးသားတစ်ဦးအပြောင်းအလဲမှပမာဏသည်။ အဆိုပါတရုတ်မြင့်တက်, BRICS, ဆီတင်ပို့သူများဖြစ်သောအာရပ်လူမြိုးမြား၏အချုပ်အခြာအာဏာဥစ္စာဓနရန်ပုံငွေ၏ကြီးထွားလာခွန်အားကိုအထောက်အထားပေးစွမ်းသည်။ အရင်းအမြစ်များစီးပွားရေးစစ်ဆင်ရေးအတွက်အစွမ်းထက်လက်နက်များဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, အရာအားလုံးပဋိပက္ခသာပြင်းထန်လာလိမ့်မည်ဟုအကြံပြုထားသည်။ နိုင်ငံတကာစွမ်းအင်အေဂျင်စီစွမ်းအင်များအတွက်ကမ္ဘာကြီးဝယ်လိုအားအထူးသဖြင့်အိန္ဒိယနှင့်တရုတ် ၏ကြီးထွားဖို့မရှိစေရန်, 2030 သည်အထိယခု မှစ. 50% တိုးမြှင့်မည်ကိုခန့်မှန်းထားသည်။ တချို့လူတွေကသူတို့ကလူတမျိုးသည်ခိုင်ခံ့နှင့်ရေရှည်တည်တံ့စေအဖြစ်အများဆုံးစစ်ပွဲများ, ကုန်ကြမ်းကျော်ဘက်မှာစစ်တိုက်ကြသည်ဟုဆိုသည်။
ကုန်ကြမ်းကျော်စစ်ပွဲစဉ်များတွင်ပါဝင်ပတ်သက်, ထုတ်လုပ်မှု၏နည်းလမ်းများထိန်းချုပ်စာရင်း၏ထိပ်ဆုံးအပေါ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ ပစ္စည်းထုတ်လုပ်မှုနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးအဘို့အထူးအရေးကြီးပါတယ်နှင့်ပစ္စည်းများကိုတစ်နိုင်ငံ၏ထုတ်လုပ်မှုဆန့်ကျင်ပြုမူစစ်ပွဲတစ်ခုထိတွေ့ဆက်ဆံမှုအဖြစ်ရှုမြင်နိုင်ပါသည်။ ထုတ်လုပ်မှု၏သူတို့ရဲ့နည်းလမ်းတခုတခုအပေါ်မှာထိုးစစ်မှတစ်ဆင့်၎င်းတို့၏စီးပွားရေးကိုတစ်ဦးလေးလေးနက်နက်ခြိမ်းခြောက်မှုနှငျ့ရငျဆိုငျရသောအခါထိုကွောငျ့, များစွာသောလူမျိုး, စစ်ပွဲထိတွေ့ဆက်ဆံ။
နောက်ထပ်စီးပွားရေးအကြောင်းပြချက်, ကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်း၏ထိန်းချုပ်မှုတစ်ခုစစ်လုပ်ဆောင်သွားရန်တစ်ဦးထက်ပိုသောအစဉ်အလာအကြောင်းပြချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဤလောက၏ကုန်သွယ်မှုအများဆုံးနေဆဲသင်္ဘော (ကုလသမဂ္ဂ) ကပြုသော်လည်းကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းများ, အင်တာနက်ရဲ့အသက်အရွယ်ကတည်းကစွယ်စုံများနှင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဖြစ်ရပြီ။ ထို့ကြောင့်, ပင်လယ်နေဖြင့်ကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်း၏ထိန်းချုပ်မှုနေဆဲမရှိမဖြစ်အရေးပါသည်။ သို့သော်ကုန်ကြမ်းနှင့်ဆက်ဆံရာတွင်မပေးကြောင်းအများကြီးကုန်သွယ်မှုကိုအင်တာနက်ကတဆင့်ပေးပို့အကြောင်းကြားနိုင်ပါကြောင်း။ တိုင်းပြည်တစ်ပြည်သည်အခြားနိုင်ငံ၏ကုန်သွယ်မှုလမ်းကြောင်းများပိတ်ထားလျှော့ချလျှင်, သားကောင်တိုင်းပြည် တန်ပြန်ရန်ထိုက်သည်။
သငျသညျကိုသတိပြုမိကြလိမ့်မယ်အဖြစ်ဤဥပစာအပေါ်အခြေခံပြီးရှိစီးပွားရေးအားသာချက်သို့မဟုတ်အားနည်းချက်များကိုတစ်ပုံစံဖြစ်, စစ်တိုက်စဉ်များတွင်ပါဝင်ခဲ့ပါသည်။ သို့သျောလညျးစစ်ပွဲစတင်ရန်အခြားစီးပွားရေးအကြောင်းပြချက်ကုန်သွယ်ရေးအမြတ်အစွန်း၏ထိန်းချုပ်မှုဖြစ်ပါတယ်။ စစ်ပွဲအခြားမဟာမိတ်လူမြိုးနှငျ့ကုန်သွယ်ရေးတိုးမြှင့်နိုင်ပါတယ်, သို့မဟုတ်ပါကကုန်သွယ်ရေးအမြတ်အစွန်းအတွက်ကျဆင်းခြင်း, ဒါမှမဟုတ်ခါနီးကျဆင်းခြင်းတိုက်ဖျက်ပေးနိုင်သည်။ စီးပွားရေးအရဆငျးရဲဒုက်ခလူမြိုးတဈမြိုး၏နောက်ဆုံးသေခြင်းတရားဆိုလို, ဒါကြောင့်စီးပွားရေးအကြောင်းပြချက်များအတွက်စစ်တိုက်သွားဖို့တရားမျှတတဲ့ဖြစ်ပါတယ်နိုင်ပါတယ်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့, စီးပွားရေးအကြောင်းပြချက်ကနေဝေးရွေ့လျား, စစ်ပွဲတွေလည်းစာချုပ်များမှတာဝန်ဝတ္တရားကြောင့်ဖြစ်ပျက်။ ပထမဦးဆုံးနှင့်ဒုတိယကမ်ဘာစစ်ပွဲများဥပမာစာချုပ်-based စစ်ပွဲများဖြစ်ဟုလျှောက်နိုင်ပါသည်။ ဤရွေ့ကားစာချုပ်များနိုင်ငံများနှင့်၎င်းတို့၏အကျိုးစီးပွားကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်အကြားအယူဝါဒဆက်ဆံရေး၏နိမိတ်လက္ခဏာကိုဖြစ်ကြသည်။ နိုင်ငံများအများအပြားအကြောင်းပြချက်များအတွက်စာချုပ်များစေ, ဒါပေမယ့်သူတို့ထဲကတဦးတည်းစစ်ရေးအင်အားတို့ကနိုင်ငံပေါင်း '' နယ်နိမိတ်များ၏ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒါကိုမြင်နိုင်ပါသည်နှင့်အမျှစစ်များသောအားဖြင့်စီးပွားရေး, အတွေးအခေါ်ရှင်နှင့်အမျိုးသားရေးအယူအဆမှချည်ထားသောဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဦးက "ကိုယ့်စစ်" စိတ်ခံစားမှုအပေါ်, ဒါပေမယ့်မဟုတ်ဘဲဆိုပါတယ်နိုင်ငံတွေ၏စည်းစိမ်ချမ်းသာကိုစောင့်ရှောက်အပေါ်အခြေခံပြီးမပေးပါ။ စစ်ပွဲများကြွလာရာစုအတွင်းအဆုံးသတ်ဘို့မလိုပါဖြစ်ပါတယ်တူသောစစ်ဘို့ဤအရာအလုံးစုံအကြောင်းရင်းများနှင့်အတူကကြည့်ရှုသည်။
esteem artzone wafrica causes war